चामलभन्दा सस्तो जीवन ! - समाचार - कान्तिपुर समाचार
हुम्लाको श्रीनगरबाट खाद्यान्न लिन बाजुराको कोल्टी आउँदै गरेका सर्वसाधारण । श्रीनगरकै तेजबहादुर बुढाको चामल लिन जाँदा पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर
चामल ओसार्ने भेडा–च्याङ्ग्रा लिएर ओहोरदोहोर गरिरहेकाको लस्कर बाटैभरि भेटिन्छ । बालकदेखि वृद्धसम्म । हुम्लीको जीवनचक्र यत्तिमै ठिक्क छ । भन्छन्, ‘खानै नपाएर ज्यान जाने अवस्था छ ।’
दसैंमा समेत चामल छैन, स्थानीयवासीको खप्की कति सहनु ? हामी त कार्यालय छाडेरै हिँड्यौं – खेमराज काफ्ले, श्रीनगर डिपोका प्रमुख
माथि भनेको भन्यै छु, तैपनि चाडबाडमा समेत चामल दिन नसक्ने भयौं – लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी
अस्थायी शिक्षकलाई माग्दै नमागेको सुविधा ›